WINE 6.7 inosvika iine rutsigiro rwakagadziridzwa rwePlag & Play vatyairi | Linux Vakapindwa muropa
Senge mavhiki maviri ega ega, uye zvakaoma kubatwa nekushamisika, WineHQ akakanda maminetsi mashoma apfuura shanduro nyowani yekuvandudza software yako kumhanyisa Windows zvishandiso pane masystem asiri eMicrosoft. Izvo zvavakaita kuti zviwanikwe kune chero munhu anoda kuzviedza ndizvo WAINI 6.7, iko kuendesa kunoitika kune iyo yakatanga mwedzi miviri yapfuura iyo yakaunza kuvandudzwa senge iyo Mono injini yakagadziridzwa kuve v6.1.1.
Semazuva ese muchikamu chino, timu yevanogadzira yakaburitsa zvikamu zviviri, chimwe chayinotaura nezvigadziriso zvebug 44 uye imwe iyo yavanotiudza pamusoro peshanduko dzese dzakaunzwa, 397 kubata-kumusoro ino. Kunyangwe pave paine vagadziri vakati wandei vakapa akawanda matinji uye kuvandudza, basa rakaitwa naZebediah Figura rakakosha, uyo akachengeta makumi masere nesere eanenge mazana mana shanduko akaunzwa vhiki rino.
WINE 6.7 inosimbisa
Zvinoshamisira kuti svondo rino rondedzero yenhau inotaura nezve shanduko nomwe, apo zvakajairwa zviri 7 kana 3 pamwe neyekupedzisira iyo yavanogara vachitaura.
NetApi32, WLDAP32, uye maKerberos maraibhurari akashandurwa kuita PE.
Rakawanda basa kubva kuMedia Foundation.
Yakagadziridzwa WOW64 faira system redirection.
Zvimwe plug & Play driver driver.
Raw khibhodi yekuisa kifaa.
Vashandisi vanofarira izvozvi vanogona kuisa WINE 6.7 kubva kune yayo kodhi kodhi, inowanikwa mukati izvi y iyi imwe link, kana kubva pamabhinari anogona kutorwa pasi kubva ku pano. Mune iyi link kubva kwatinga dhawunirodha mabhinari pane zvakare ruzivo rwekuwedzera iyo yepamutemo chirongwa repositi kuti ugamuchire izvi uye nezvimwe zvichavandudzwa mune ramangwana pavanongogadzirira masystem senge Ubuntu / Debian kana Fedora, asi kune zvekare mavhezheni e Android uye macOS.
Iyo inotevera yekuvandudza vhezheni ichave WINE 6.8, uye ichave ichinyatso svika Chishanu chinotevera, Chivabvu 7. Pakati pezvauchasuma, chinhu chega chatinogona kukuvimbisa ndechekuti ichauya nemazana ediki ekuvandudza uye kugadzirisa sekugara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » WINE 6.7 inosvika iine rutsigiro rwakagadziridzwa rwePlag & Play madhiraivha uye angangoita mazana mana shanduko
Ubuntu 21.04 yakatoburitswa, ziva nhau dzayo dzinonyanya kukosha